Qoys Somali ah oo Noorway barafka loo tuurey oo saacado ku taajirey - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Qoys Somali ah oo Noorway barafka loo tuurey oo saacado ku taajirey
Qisada ku dhacday qoys Somali ah oo ku nool dalkaasi Noorway ayaa soo jiidatey gabadh cadaana oo ay jaar yihiin kadib markey aragtey sida qoyskan loola dhaqmey iyo awooda baraha bulshada.
Sidee ku bilaabatey sheekada
Maxamed Aadan wuxuu ku jirey guri ay siisay xaafada uu ka degan Noorway sida caadiga ah ee ka mida sharciga dalka u yaala maadaama dakhligiisu aad u yaraa oo la kabi jirey. Waxase is bedelay dakhliga soo galay oo keentay inaanu xaq u lahayn guriga uu degan yahay oo hadda ay xaq u leeyihiin dad ka liita isaga.
Maxamed ayaa dakhligiisu hadda gaaray mid uu ku kiraysan karo guri gaara, waxase Maxamed ku dooday in waqti la siiyo uu guriga uga baxo maadaama ay dhaxan tahay dalkana uu ka jiro cudurka Karoona.
Waxase u muuqata xaafada uu degan yahay inayna u soo jawaabin hoosna u fiirin codsiga uu soo qortey, ee waxay soo direen sidii caadiga ah askar u qaabilsan guryo-saarista.
Askartii ayaa guriga ugu yimi Maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa oo qaarkood hurdaan, waxana xoog dibedda loogu tuurey barafka, inkastoo askar ka mida kuwa soo xirayay guriga uu u sheegay inuu caawa geyn doonaan hoy ay dhaxanta ka galaan.
Waase diideen qoysku. Waxa haddaba jaar la ahayd gabadh cadaana oo ka naxday qoyska dibedda la dhigey, waxayna sheekadooda gelisay baraha bulshada ayadoo dalbatey in la siiyo lacag deemaajiga ay isaga bixiyaan.
Lacagta ay marka hore codsatey ayaa ahayd 50,000 oo lacagta dalkaasi ah, waxase lacagtaasi lagu aruurshey muddo saacad ka yar, markey ka yaabtey deeqsinimada iyo naxariista dadka ayaa markii dambe ay ka codsatey in loo gaarsiiyo hal milyan si guri ugu iibsadaan.
Halka dhinaca kale markii qoraalkasi ku faafay baraha bulshada uu markiiba gaaray xaafada dibedda dhigtey qoyskan oo markiiba go’aan ku gaaray inay is wada casilaan, maadaama ay gabeen hawshoodii daryeel.
Hadda Maxamed iyo qoyskiisa waa taajiriin ku dhow inay gataan guri ay hanti u leeyihiin.